Van Gaal iyo Mourinho oo isku waafaqay in United ay qaadi karto horyaalka
HomeWararka MaantaVan Gaal iyo Mourinho oo isku waafaqay in United ay qaadi karto horyaalka
Louis van Gaal ayaa ku adkaystay in kooxdiisa Manchester United ay wali haysato fursadii ay ku qaadi kari lahayd horyaalka Ingiriiska ee Priemier League, fikradaas ayaa ah mid uu isna hore ugu dhawaaqay Jose Mourinho.
United ayaa imika fadhida kaalinta afraad ee kala saraynta, 8 dhibcoodna ka hooseysa naadiga The Blues oo hogaanka horyaalka haysa, waxaanu Van Gaal ku yidhi saxafiyiinta. “Manchester United xisaab ahaan ayay ku qaadi kartaa horyaalka , waanan samayn karnaa.”
Mourinho ayaa isaguna sidan oo kale hore uga dhawaajiyey in United ay haysato khidadkii ay ku qaadan lahayd bilada horyaalka.
Waxaanu yidhi isagoo arintaas ka hadlaya: “Imika hirdanka horyaalku afar kooxood buu dhex yaalaa. Waad aragtaa faraqa dhibcaha ah ee noo dhexeeya, waana inaad sheegtaa in Afartaas uu u dhexeeyo. Faraqa dhibcaha ee u dhexeeya kaalinta labaad, saddexaad iyo afraad ayaa igu kalifaya inaan ka fikiro inay igu dhaw yihiin.
“Manchester United ayaa meesha taagan. Dhibcihii ayaa meesha taagan, Ciyaarta ugu dambeysa waxaa la isla tagi doonaa iyadoo faraqa la isku dhegan yahay, markaad eegto awoodooda iyo qaab ciyaaroodkoodana. Waad dareemi kartaa in United meesha taagan tahay.”
Sidee Ayey Kooxaha Spain U Safi Doonaan Ciyaartooygooda?
21/08/2015 Abdiwahab Ahmed
Sassuolo 0 – 0 Cagliari – Full Highlights
11/02/2018 Diiriye Ahmed
Xulka Germany Oo Goolal Ku Suuxiyey Cameroon, Una Gudbay Semi Finalka Koobka Qaaradaha
25/06/2017 Abdiwahab Ahmed